दुनियामा सबैभन्दा पहिले कसलाई भएको थियो एड्स ? « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : 19 December, 2017
गत डिसेम्बर १ मा विश्वमा एड्स दिवस मनाइयो । १९८८ देखि यो दिनमा मानिसहरुलाई एचआइभी एड्सप्रति जागरुकता फैलाउनका लागि दिवस मनाउने गरिएको हो । अहिलेसम्म एड्स रोग निको पार्ने उपचार तथा औषधि पत्ता लागेको छैन ।
आखिर सबैभन्दा पहिले कुन व्यक्तिलाई एड्स भएको पत्ता लागेको थियो त ? अनि के कारणले मानिसमा पहिलोपटक एड्स सरेको थियो ?
वैज्ञानिकहरुका अनुसार चिम्पान्जीबाट मानिसमा एड्स सरेको हो । सन् १९०८ मा क्यामरुनको जंगलमा एक घाइते चिम्पान्जीले एक सिकारीमाथि आक्रमण गरेर टोकेको थियो । चिम्पान्जीको आक्रमणबाट सिकारीको सरीरमा गहिरो घाउ लाग्यो । घाइते चिम्पान्जीको रगत घाइते सिकारीको शरीरको घाउमा मिसिँदा सिकारीको सरीरमा संत्रमण फैलियो ।
केही शोधकर्ताहरुका अनुसार यो भाइरस एकजना समलिंगी पुरुषबाट अन्य मानिसमा फैलिएको हो । तिनै व्यक्तिलाई दुनियामा एड्स फैलाउन जिम्मेवार मानिन्छ । गेटन डुगास नामक ती व्यक्तिका बारेमा सन् १९८० मा पूरा संसारलाई थाहा भयो ।
गेटन पेशाले क्यानडाली हवाई कर्मचारी थिए । उनले अमेरिकाका केही मानिसलाई संक्रमित गर्नका लागि आफुमा रोग रहेको जानीजानी यौन सम्बन्ध राखेका थिए । सोही कारण उनलाइ पेसेन्ट जिरोको नामले पनि चिनिन्छ ।
अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोका डाक्टरहरुले पहिलोपटक यो भाइरस पत्ता लगाएका थिए । त्यसको दश वर्षभित्रमा एड्सबाट अमेरिकामा कम्तिमा ६० हजार मानिसको ज्यान गएको थियो ।